“गुटको राजनीति,ले कांग्रेस, लथालिङ्ग भयोः डा. शेखर कोइराला” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गुटको राजनीतिका कारण कांग्रेस पार्टी लथालिङ्ग भएको बताउनुभएको छ ।कांग्रेस सभापतिको हैकम र मनोमानीले पार्टीको विधान समेत धूजारधूजा पारेर च्यात्ने काम भएको बताउनुभयो ।”
‘कोइरालाले विधानको कुन धारा कतिबेला निलम्बन गरिन्छ वा के थपिन्छ फेसबुक हेरेर थाहा पाउँनुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला पिच्छे फरक९फरक नियम बनाएर अधिवेशन गरिएको छ। नेतृत्वमा बसेकाहरु जसरी पनी पार्टी कब्जाको अभियानमा छन।’ बताउनुभयो ।”
“इतिहासमा कांग्रेसको अधिवेशन प्रहरीको धेराबन्दीमा भएको थाहा नभएको भन्दै सभापतिकै जिल्लामा सुरक्षाकर्मी लगाएर अधिवेशन गरिनु खेदजनक भएको कोइरालाले बताउनुभयो ।”
“सुन्दरहरैंचा नगर मोरङ्को नव निर्वाचित कार्यसमितिको पदस्थापन एवं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कोइरालाले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको मिलेमतो र साँठगाँठले लोकतन्त्र खतरामा परेको पनि बताउनुभयो । कोइरालाले लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी सभापतिले नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउनुभयो ।”
“कांग्रेसका पूर्व आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य तेजप्रसाद सिटौलाले पार्टी माफियाको हातमा गएको भन्दै कांग्रेसभित्र शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।””
Previous “एक पछि अर्को रहस्यको, पर्दा खुल्दै, जेठान,पछि सम्धी काण्ड बहिरिए पछि, चोलेन्द्रलाई अर्को आपत !
Next “संविधानसभा सदस्य, केसीद्वारा, माधब नेपालको यति ठुलो प्रस्ताब, ठाडै अस्विकार , एमालेमै रहने !”